Any Questions? ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် ( အပိုင်း ၄ နောက်ဆုံးပိုင်း) - DVB
Any Questions? Lead Story ဆောင်းပါး ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ
Any Questions? ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် ( အပိုင်း ၄ နောက်ဆုံးပိုင်း)
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ပါတီတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် First time voters လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး ပါတီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည် ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတပတ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် အပိုင်း၄ နောက်ဆုံးပိုင်းကို တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်ကတော့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးခွန်သိန်းဖေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီနေ့လူငယ်တွေဟာ နောင်တစ်ချိန် ကျနော်တို့ နိုင်ငံတော်ကြီးကို ဦးဆောင်မယ့် အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုခံယူတဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း ကျနော်တို့ လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဝက်ကျော်ဟာ ကျနော်တို့ လူငယ်ပညာတတ်တွေကို ဦးစားပေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့မှ အမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေကိုလည်း ကျနော်တို့ ဦးစားပေးထားပါတယ်။
ဒါဟာ ကျနော်တို့ဘာကိုမျှော်ကိုးလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပုခုန်းပြောင်းတာဝန်ကို ကျနော်တို့ထက် စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့် ကျနော်တို့ ပညာတတ်လူငယ်တွေကို ကျနော်တို့ အားကိုးတကြီးနဲ့ ပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင် စေချင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဒီတစ်ခေါက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဲပေးမယ့် လူငယ်တွေကို အထူးမှာကြားလိုတာကတော့ ကျနော်တို့ လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၊ ပညာတတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ဦးစားပေးတဲ့ ကျနော်တို့ ပါတီကို ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ အနေနဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အားပေးကြပါလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ အထူးပန်ကြားလိုပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါကတော့ ကြိုတင်ရယူထားတဲ့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ ပါတီမိတ်ဆက်စကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ စုစံသန်းဝင်းပါ။ စုစံသန်းဝင်း မေးခွန်းမေးလို့ရပါပြီ။
မေး။ ။ ညီမတို့တောင်ကြီးမြို့မှာဆိုရင် တောင်ပေါ်မြို့ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ မြစ်တွေ၊ ချောင်းတွေကလည်း အရမ်းအလှမ်းဝေးတယ်။ အဲဒီတော့ ညီမတို့တောင်ကြီးက မြေအောက်ရေကိုပဲ အဓိကထားအသုံးပြုရတာပေါ့နော်။ မြေအောက်ရေဆိုတော့ အချိန်အရမ်းကြာလာရင် မြေအောက်ရေ ခမ်းခြောက်မှုတွေက ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ မြို့ပေါ်မှာ ရေအရင်းအမြစ် အသုံးချမှု အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးတာဝန်ယူမလဲဆိုတာ အနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဘယ်လိုမျိုး ပိုပြီးတော့ကောင်းလာအောင်၊ အဆင့်မြင့်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်ရှင့်။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ သမီးခုနက မေးသွားတဲ့ မေးခွန်းလေးကတော့ တကယ်လည်း ကောင်းမွန်တဲ့ မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ နောက်ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ သစ်တောလုပ်ငန်း
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့ အန်တီတို့ရဲ့ မူဝါဒခေါင်းစဉ်အောက်က နေပြီးတော့ သွားတာပါ။ နောက်ပြီးတော့ သူက ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ သဘာဝမြေအောက်ရေ ဆိုတာက ရေရှည်သစ်တောကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့လည်းများစွာ လိုအပ်ပါတယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဂေဟစနစ်တွေကို စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်၊ တရားမဝင် သစ်ခုတ်တာတွေ၊ မီးသွေးဖုတ်တာတွေ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်တာတွေ၊ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးတာတွေကိုပေါ့နော်။ ဒီ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် ညှိနှိုင်းစီမံ ခန့်ခွဲကြရမယ်ပေါ့။ ဒါက တရားဥပဒေပိုင်းတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်သွားပြီပေါ့။
နောက် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ပြီးတော့မှ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားမယ်ပေါ့၊ အဏုဇီဝမျိုးစိတ်တွေကိုလည်း စပ်လျဉ်းပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့မှ ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေတော့ ရှားပါးနေပါပြီဆိုတဲ့ ကြေညာချက်မျိုးတွေ၊ သနားလာအောင်ပေါ့နော်။ ဒါကတော့ ရှမ်းပြည်မှာပဲ ရှိပါတယ်၊ အဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့။ တရားမဝင် တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိအောင် ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေတွေလည်း ဖော်ဆောင်နေပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ၊ အခြားသစ်တောထွက်ဆိုတာ ကိုယ့်ဒေသမှာ ရှားပါးတဲ့ သစ်ခွပန်းတွေ၊ ဆေးပစ္စည်းတွေပေါ့၊ ကုန်ချောဖြစ်ဖြစ်၊ ကုန်ကြမ်းဖြစ်ဖြစ် တင်သွင်းရောင်းချခွင့်တွေကို ဥပဒေနဲ့ ပိတ်ပင် တားမြစ်ရပါမယ်။ ဒီလိုမျိုး သစ်တောကြီးကို ဝိုင်းပြီးတော့မှ ပြည်သူရော၊ အစိုးရရော ပူးပေါင်းထိန်းသိမ်းလိုက်မှသာလျှင် မြေအောက်ရေ မခန်းခြောက်ဘဲနဲ့ အားလုံးစိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ ကမ္ဘာမြေလေးကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း မူဝါဒထဲမှာ ရေးဆွဲထားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ နောက်ထပ်တစ်ယောက်က ပိုင်ပိုင်၊ မေးခွန်းလေး မေးပေးပါဦးရှင့်။
မေး။ ။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့ကပေါ့နော်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ရန်ကုန်မှာ ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်မေးချင်တဲ့ ပါတီကတော့ SNLD ပေါ့နော်။ မေးချင်တာကတော့ မေးခွန်းနှစ်ခုပေါ့နော်။ တစ်ခုကတော့ အရှေ့က ညီမလေး မေးသွားတာ ပါသွားပြီပေါ့နော်။ SNLD ကို မေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီမေးခွန်းက တခြား နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးအတွက်လည်း အရေးကြီးတဲ့အရာ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အခု ကျနော်တို့ First Time Voters တွေ အနေနဲ့ရော၊ တခြားလူတွေ အနေနဲ့ရောပေါ့၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ No Vote ဆိုပြီးတော့မှ သူတို့ ကမ်ပိန်းသဘောမျိုး လုပ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဒါက အင်မတန်ကို စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်တယ်ပေါ့။ အဲဒီအခြေအနေကို ကျနော်တို့လို First Time Voters တွေ အနေနဲ့ မဲပေးလာအောင်၊ ဒီကိုဗစ်နိုင်တင်း ကာလအတွင်းမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ ကြားထဲကနေ ဘယ်လိုများ သူတို့ မဲရုံကိုလာပြီးတော့ မဲပေးနိုင်အောင် အွန်လိုင်း၊ အော့ဖ်လိုင်း ကမ်ပိန်းတွေ ဘယ်လိုများ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိလဲပေါ့။ အဲဒါလေးကို SNLD ကို မေးချင်ပါတယ်လို့။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အခု အားလုံးလည်း သိတဲ့အတိုင်း ရှမ်းပြည်ကိုလာဖို့အတွက် အခု အစိုးရကလည်း ထုတ်ပြန်ထားတဲ့၊ ယူအီးစီက ထုတ်ပြန်တာကလည်း သူက ဒေသန္တရအမိန့်ပါ လိုက်နာရမယ်ဆိုတော့ အခုက ကလောကိုလည်း ကျော်လို့မရတော့ဘူး။ ကလောကလည်း ကျနော်တို့ အဝေးကနေ သွားတယ်ဆိုတော့။ အဲဒီလို ဆိုတော့ကာ အဓိကအားဖြင့်တော့ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ ကျနော်တို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖူးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဟောင်းတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ပါတီဝင်တွေ၊ မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူတွေဆီကို အရောက်သွားဖို့ ကျနော်တို့ကတော့ ဒါ လမ်းညွှန်ထားတာ ရှိပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး တောလိုမျိုးကအစပေါ့ဗျာ။
နည်းလမ်းတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ – အနီးအနားကပ်လို့မရတော့ လော်စပီကာနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း လော်ဥပဒေကလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက စပြီးတော့ ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တယ်ဆိုရင် မတရားပြုကျင့်မှုဆိုတဲ့ပုံစံ၊ ဒါမှမဟုတ် အရည်အချင်းပျက်ယွင်းတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံ အင်မတန် ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကျနော်တို့ ကြိုးစားပြီးတော့ ဒါတွေကို လွတ်ကင်းအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်မယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အွန်လိုင်းပေါ့ဗျာ။ အွန်လိုင်းမှာတော့ အားလုံးလည်း တွေ့မှာပါ။ ကျနော်တို့လူငယ်တွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ မိတ်ဆက်ပေးတာ ရှိတယ်။ ပြီးရင် တောက်လျှောက်လည်း လာပါဦးမယ်။ ကျနော်တို့ ရေဒီယိုတွေလည်း အခု ကျနော်တို့ တစ်ခု၊ နှစ်ခု စတင်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာက အစပေါ့လေ။ ဗီဒီယိုမှာက ပစ်မှတ်က လူငယ်တွေလည်း ပါမယ်၊ အမျိုးသမီးတွေလည်းပါမယ်။ နောက်ဆုံး တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပေါ့ဗျာ၊ အားလုံးလည်းသိတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ကျနော်တို့ပါတီမှာ ယှဉ်ပြိုင်မယ့်သူတွေဆိုရင် ကချင်လည်းပါတယ်၊ လားဟူလည်းပါတယ်၊ အခြားလည်း ပါပါသေးတယ်။ ဒီ လူမျိုးတွေက အစပေါ့လေ။ အဲဒီလိုမျိုး ကျနော်တို့ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားနဲ့ ကိုယ့်ပါတီက ပြောတဲ့မူဝါဒနဲ့ တကယ်လုပ်ဆောင်နေတာ တကယ် ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတဲ့ဟာကို ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ကျနော်တို့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူမျိုးအခြေစိုက်၊ ပြည်နယ်အခြေစိုက် ကျနော်တို့လုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စ၊ နောက်ပြီးတော့ မူဝါဒကိုလည်း ကျနော်တို့ လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ၊ လူကြီးပိုင်းကနေ၊ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့ ပါတီမူဝါဒတွေကို တောက်လျှောက် ပြောသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ အခုမှလုပ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တောက်လျှောက် ကျနော်တို့ ပါတီ လူကြီးတွေက SNLD မှာ ဘယ်လိုမျိုးကိစ္စတွေ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေလဲ၊ ဘယ်လိုမူဝါဒနဲ့ သွားနေပါတယ်ဆိုတာကို သတင်းမီဒီယာတွေကနေတစ်ဆင့် အမြဲတမ်းလည်း လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကာလရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ပါတီကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဖြေပေးပါ့မယ်။ ဒါ အတတ်နိုင်ဆုံး ကျနော်တို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒီ အခက်အခဲကြား၊ ကိုဗစ်ကြားထဲမှာဆိုပေမယ့် ကျနော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ လူငယ်များကလည်း ကျနော်တို့ပါတီတင်မက ရွေးကောက်ပွဲဝင်နေတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ပါတီတွေကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ကူညီပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားတဲ့ ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရော၊ မေးမြန်းပေးသွားတဲ့ လူငယ်တွေကိုရော ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်။
ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မဲပေးသူတစ်ဦးအနေနဲ့ သွားပြီးတော့ လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက No Vote ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို မလုပ်ခင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Vote တစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်ထိ တန်ဖိုးရှိလဲ၊ ဘယ်လောက်ထိ အရေးကြီးလဲဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိရှိပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရော၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မဲသွားပေးဖို့ကို ဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ လူတွေအားလုံးကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ လယ်ယာမြေ ပြဿနာတွေ၊ ပြီးတော့ သတ္တုတွင်း ပြဿနာတွေ၊ ပြီးတော့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေ အဲဒါတွေကို အဓိကထားပြီးတော့ ဖြေရှင်းပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်။
လူငယ်တွေကို များများလှုံ့ဆော်ပေးဖို့ပေါ့နော်။ အခု လူငယ်တွေ ငါးသန်းမဲပေးဖို့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် လူငယ်တော်တော်များများ၊ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကျနော့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူငယ်တော်တော်များများ သွေးအေးနေကြတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်လည်း သူတို့ စိတ်ဝင်စားမှု သိပ်မရှိဘူး။ အဲဒီအတွက် အထက်ကလူကြီးတွေအပြင် ရပ်ရွာက လူကြီးတွေပါ များများ လှုံ့ဆော်ပေးစေချင်တယ်။ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းမှန်တွေကိုလည်း အချိန်နဲ့ တပြေးညီပေါ့၊ အဲဒါလေးတွေ ထုတ်ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်ပေါ့။
အခုဆိုလို့ရှိရင် အန်စီအေ လက်မှတ်သာရေးထိုးထားတယ်၊ ဒါပေမယ့် စစ်ပွဲတွေက ဆက်လက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာဆိုရင် စစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပညာရေးကဏ္ဍမှာ တအားနိမ့်ကျတယ် ပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ တကယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးသာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးတွေရော၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေရော တကယ့် စီးပွားရေးတွေရောက ပိုမိုပြီးတော့ အကျိုးသက်ရောက်လာမယ်လို့ ထင်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါကတော့ လူငယ်တချို့ရဲ့ သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပြောပြပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဆက်ပြီးတော့ ကျမတို့ အမေးအဖြေကဏ္ဍကို ဆက်ပြီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အခုနောက်ထပ် မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ ကိုဇေယျာလင်းက မေးထားတာပါ။ သူကတော့ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီကို မေးထားတာပေါ့နော်။ ဒီ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်မှာလားဆိုပြီးတော့ သူက မေးထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဓနုကဆရာ ဖြေပေးပါဦးရှင့်၊ ဦးခင်မောင်ချို။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ တကယ်အမှန်ကတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဆိုတာသည် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးက တကယ်ပြင်ချင်တာပါ။ တကယ်တော့ တိုတိုနဲ့ လိုရင်းပြောရရင်တော့ ကျနော်တို့ အနိုင်ရသွားရင်တော့ ၂၀၀၈ ခြေဥကို ပြင်မှာပါ။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရလို့ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်ထဲမှာလည်း ဒါတွေ ရေးဆွဲထားတာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုရေးဆွဲထားလဲဆိုတော့၊ ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်ကို အခြေခံပြီး အမျိုးသားတန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးတို့ကို အာမခံသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာ ပါပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်ဖြစ်ရင်တော့ ဒီ ၂၀၀၈ က သူ့အလိုအလျောက်ပျက်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်အရင်တစ်ခါကလည်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ပါတီ မဆိုထားနဲ့ ၂၀၀၈ ခြေဥသည် ပေးထားချက်အရ တပ်မတော်က သဘောမတူရင် တစ်နိုင်ငံလုံး မဲထည့်ရင်တောင်မှ ပြင်လို့မရတဲ့ အနေအထားမျိုးပါ။ ဒါတွေကို ပြည်သူတွေ သိစေချင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ၂၀၀၈ ခြေဥ ပြင်မယ် ပြင်မယ်လို့ ပြောနေတာထက် ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုလည်း ဦးဆောင်တဲ့ပါတီတွေက ချပြပေးဖို့ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စဉ်းစားချက်ကတော့ ခုနကပြောနေခဲ့သလိုမျိုးပဲ၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ၊ ၂၁ ရာစု ပင်လုံသည် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ကောက်ရိုးတစ်မျှင်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ အဲဒီတော့ အားလုံး အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ ဝိုင်းဝန်း ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၀၈ ခြေဥကလည်း သူ့အလိုအလျှောက် ပျက်ပြယ်ပြီးတော့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံး လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ချင်တယ်ဆိုတာသည် ၂၀၀၈ ခြေဥကို ပြင်ဖို့ရယ်၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကို သွားဖို့ရယ်ပါ။ ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ အဓိက ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အခု နောက်ထပ်မေးခွန်းပေါ့နော်။ မေးထားတဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ကိုခန့်ဇော်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဒါ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ) မေးထားတာပေါ့။ တကယ်လို့ မဲနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင် အောက်ခြေပြည်သူတွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ၊ ပြည်သူတွေ တောင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုရော တကယ်ပဲ လုပ်ပေးနိုင်မှာလား။ ဒီလိုမျိုး လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာတွေကိုရော ဘယ်လိုသက်သေ ပြသွားမှာလဲ ဆိုပြီးတော့ သူကမေးထားပါတယ်ရှင့်။ ဒီတော့ ပ.အ.မ.ဖက ဆရာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အကယ်၍ ကျနော်တို့ ၂၀၂၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်သွားမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆိုတာ ကျနော်တို့ မူဝါဒ ထားထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရှိတယ်။ ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲ ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ ဒေသခံ ပြည်သူလူထုတွေက စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ များတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးကို ဘယ်မှာသွားအခြေခံလဲဆိုတော့ မြေယာပေါ်မှာ အခြေခံတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့က မြေယာတွေ၊ အခုအသိမ်းခံရတဲ့ဒေသတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ရေရှည်မှာ ဘယ်လိုသွားမလဲ ဆိုတဲ့ဟာကို ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အကယ်၍ ကျနော်တို့ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရထဲမှာ ဝန်ကြီးတနေရာရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့က အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ရောက်သွားတဲ့ အခြားပါတီတွေ၊ အစိုးရထဲမှာ ဖွဲ့နိုင်တဲ့ အခြားဝန်ကြီးတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှ မြေယာပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်အောင်တော့ ကျနော်တို့ ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ရမှာပဲ ဖြစ်တယ်။
အဲဒီကနေမှ ခုနကပြောတဲ့ ဒေသခံ တောင်သူတွေက ငြိမ်းချမ်းစွာ စိုက်ပျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စိုက်ပျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့စိုက်ပျိုးလို့ရရှိထားတဲ့ ကုန်စည်တွေကို ဘယ်နေရာမှာ ရောင်းချမလဲ ဆိုတဲ့ဟာက မေးခွန်းမေးစရာ ရှိပါတယ်။
ဥပမာ – ပြီးခဲ့တဲ့ ကာလတွေမှာဆိုရင် ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပြောင်းတို့၊ ကြက်သွန်ဖြူတို့ ဆိုတာတွေရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်ကို အဓိကထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ ပြောင်းတို့ ကြက်သွန်ဖြူတို့က ဘော်ဒါထရိတ်လို့ ခေါ်တဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တဲ့ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေက ထိထိရောက်ရောက် မကိုင်တွယ် မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အခါကျတော့ တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေက ဈေးပေါပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ ဒေသတွင်းမှာ ထွက်နေတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့နေတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး မဖြစ်အောင်တော့ ကျနော်တို့ အနာဂတ်ကာလမှာက အခုနပြောတဲ့ Border Trade Control ကိုတော့ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာဖြစ်ဖြစ် ထိရောက်တဲ့ မူဝါဒတွေကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့လုပ်လို့ရမယ့်၊ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုပေါ့။
နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့သာ နိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့က ပြည်သူလူထုတွေကို တသားတည်းဖြစ်အောင်၊ ကျနော်တို့ လွှတ်တော်အမတ်တွေက ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ တသားတည်း ဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့ ရှိတယ်။ အဓိကကတော့ ဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ၊ ပြည်တွင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကို ချပြဖို့ လိုအပ်တယ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။
နောက်တစ်ခုက နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း ရေးဆွဲထားတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်တွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာတွေကိ ဒေသခံပြည်သူလူတွေက သိဖို့လိုအပ်တယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ သိရုံနဲ့ပြီးသလား ဆိုတော့လည်း မပြီးဘူး။ သူတို့က နှစ်တိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ ရှမ်းပြည်က ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းတွေက Budgeting တွေက Participatory Budgeting ပုံစံနဲ့ သွားကိုသွားရမှာပဲဖြစ်တယ်။
အဲဒီတော့ ပြည်သူလူထုတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်အစိုးရ ဘတ်ဂျက်တွေကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှပဲ ကျနော်တို့ ခုပြောနေတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေက သိရှိဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်တယ်။ ဒါမှပဲ သူတို့က ဘယ်အရာက၊ ဘယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိပြီးတော့မှ ဘယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက အကျိုးမရှိဘူးလဲဆိုတာ သိရမှာပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး သိမှ ဘယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတော့ဖြင့် လက်ခံပြီးတော့မှ ဘယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတော့ဖြင့် လက်မခံဘူး၊ ကန့်ကွက်ရမယ်ဆိုတာကို သိမှာပဲဖြစ်တယ်။
အဲဒီတော့ ဒါကတော့ မဖြစ်မနေ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် ကျနော်တို့ရဲ့ ၂၀၂၀ အလွန် လုပ်ငန်းဆောင်တာထဲမှာ ဒါက ကျနော်တို့ ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတယ် ဆိုတဲ့ဟာကို ပြောချင်တာပေါ့နော်။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အခု မေးခွန်းတွေကို စာနဲ့ပေးပို့မေးကြတဲ့ လူငယ်တွေကိုရော၊ ဖြေပေးခဲ့တဲ့ ပါတီအသီးသီးက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျမတို့ရဲ့ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်မေးမြန်းချင်တဲ့ လူငယ်တွေကို ကြိုတင်ရယူထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါ။ ကျနော် စိုင်းနိုင်အောင်ပါ။ ကျနော်ကတော့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ သီပေါမြို့နယ် နမ့်လမ်ကျေးရွာအုပ်စုနေ လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျနော့်အနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပထမအကြိမ် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ SNLD ပေါ့နော်၊ ပါတီကို မေးမြန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကတော့ ကျနော်တို့လို တက်သစ်စ လူငယ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးကိုလည်း အကျွမ်းတဝင် မရှိသေးတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်၊ ပါတီနိုင်ငံရေးတွေကလည်း ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ နေထိုင်ကြတယ်။ ပြီးတော့ အများအားဖြင့် ကျနော်မြင်တွေ့နေရတာကတော့ လူမျိုးစွဲပေါ့နော်။ ရှမ်းဆိုလည်း ရှမ်းပါတီ ဖြစ်မှ၊ ပအိုဝ်းဆိုလည်း ပအိုဝ်းပါတီဖြစ်မှ၊ ဗမာဆိုလည်း ဗမာပါတီဖြစ်မှ။ အဲဒီလိုမျိုးလူမျိုးစွဲတာလည်း မြင်ရတာပေါ့နော်၊ အများအားဖြင့်။
ဒါပေမယ့် ကျနော့်အနေနဲ့ ကျနော်မေးချင်တဲ့ အဓိက မေးခွန်းကတော့ ကျနော်တို့ တက်သစ်စလူငယ်တွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပါတီတွေကို ဘယ်လိုမျိုး အချက်တွေကို ကြည့်ပြီးတော့ မဲဆန္ဒပေးသင့်တယ်၊ ပြီးတော့ ဘာအတွက်ကြောင့်လဲပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး မေးချင်ပါတယ်။
ဒီမောင်လေးကတော့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မေးထားတဲ့အတွက် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။
ဖြေ။ ။ မေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဒီပါတီနိုင်ငံရေးကို လူငယ်တွေက အများကြီးသိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ့်ကို နောင်တစ်ချိန်ကျရင်လည်း တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ရမယ့်သူက လူငယ်တွေပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို လူကြီးတွေက အမြဲတမ်းပြောတာပေါ့။ အဲဒီလို ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ပဲ လူငယ်တွေကို သိပ်နေရာပေးတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်ကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ မဖြစ်မနေ ကျနော်တို့ Main Stream လို့ပြောလို့ရတဲ့ ပြုပြင်တယ်ဆိုတာ အပေါ်မှာချည်း တစ်ခါတည်း ပြုပြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တမ်း ပြုပြင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ အောက်ခြေကစ ပြုပြင်ရမှာဖြစ်တယ်။
ဆိုတော့ ကျနော်တို့ပါတီမှာဆိုရင်တော့ မြို့နယ်နဲ့ ရပ်ကျေးအဆင့်ကအစ လူငယ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ဟာကို တကယ့်ကိုလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ချမှတ်ပြီးတော့ ပေါ်ထွက်ခိုင်းတာရှိတယ်။ အဲဒီအတိုင်း မပြည့်မီဘူးဆိုရင် ပြန်ဖွဲ့မယ်၊ အဲဒါ တရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့။ အဲဒီ မြို့နယ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျေးရွာ ကော်မတီပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုတွေရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လူမျိုးစွဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာ။ အဲဒီကိစ္စကို ကျနော်တို့ ကျော်လွန်သင့်ပြီလို့ ကျနော်တို့ မြင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၀၁၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ကြားဖြတ်က ၂၀၁၈ ပေါ့လေ။ ၂၀၁၀ ကနေ စခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ ၂၀၁၀၊ ၁၂၊ ၁၅ အထွေထွေ၊ ၁၇၊ ၁၈ ကြားဖြတ်ပေါ့ဗျာ။
အဲဒီတော့ကာ ကျနော်တို့ဒီလောက် ဖြတ်သန်းပြီးပြီဆိုခဲ့ရင်တော့ဖြင့် တချို့က ပြောကြတယ်၊ ပါတီကြည့်ကြပါ၊ လူမကြည့်ကြပါနဲ့လို့။ တချို့က လူကြည့်ပါ၊ ပါတီမကြည့်ပါနဲ့ဆိုပြီး ပြောတာဆိုတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါမျိုးတွေ ကျနော်အနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ လူမျိုးစွဲတွေကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ကျနော်တို့က ဖြုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့က လူမျိုးစုအခြေစိုက်ပါတီက ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီ။ ကိုယ့်လူမျိုးက မလုပ်နဲ့လို့ ပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ ကိုယ့်မျိုးနွယ်၊ အမျိုးတွေကို ချစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဆိုတာ ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဟာကိုလည်း အမျိုးကိုလည်း ချစ်ရမယ်။ နောက်တစ်ဆင့် ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုလည်း ကိုယ်ချစ်ရမယ်။ နောက်တစ်ဆင့် ကိုယ့်နိုင်ငံကိုလည်း၊ ကိုယ့်ပြည်ထောင်စုကိုလည်း ကိုယ်ချစ်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။
ဒီတော့ကာ လူမျိုးစွဲတွေကိုလျှော့ပြီးတော့၊ ဒါဆိုရင် လူမျိုးစွဲတွေကို လျှော့ပါပြီ၊ ဘာကို ဦးစားပေးရမလဲ ဆိုတော့ အဓိကအားဖြင့် မူဝါဒတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီတစ်ခုက ဘာမူဝါဒတွေ ရှိသလဲပေါ့။ ကျနော်တို့ ပြောကြတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကို သွားကြမယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ပြောနေတဲ့ ပါတီတွေမှာ ဖက်ဒရယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မူဝါဒ အသေးစိတ်တွေရှိပြီလား၊ ဘယ်လို ဖက်ဒရယ်ကို တည်ဆောက်မလဲလို့ သွားမေးရင် သိပ်မဖြေနိုင်ကြဘူးပေါ့ဗျာ။
အဲဒီတော့ တကယ်တမ်းဖြစ်သင့်တာက ကျနော်တို့နိုင်ငံ ဒီလိုသွားမယ်ဆိုတာ ပြောရမယ်။ Vision ပေါ့ဗျာ။ ပြောရမယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ ဘယ်ကိုသွားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Vision။ နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ ဒီ Vision ကို ဘယ်လိုဆန္ဒမျိုးတွေနဲ့ သွားမလဲပေါ့။ ပြီးရင် ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မလဲပေါ့။ ဘယ်လိုမူဝါဒတွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စကို လုပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဆိုတော့၊ အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကို ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် သူ့မှာ မူဝါဒတွေ ဘယ်လိုရှိလဲ။ အဲဒီတော့ လူငယ်တွေက ပိုပြီးတော့ သိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လူငယ်တွေက ပိုပြီးတော့ မူဝါဒလို့ ပြောတဲ့အချိန်မှာ သာမန်ကာလျှံကာနဲ့ ခေါင်းစဉ်ရွတ်နေတဲ့ မူဝါဒလား။ ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း ဒီ မူဝါဒလို့ ပြောလိုက်တဲ့ အနောက်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပါသလားပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ အဲဒီလောက်အထိ ချဉ်းကပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မယ်၊ ကျနော်ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်၊ ကျနော်တို့က ဟိုဟာလုပ်မယ်၊ ဒီဟာလုပ်မယ် ပြောရုံနဲ့မရဘူး။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ ပြောရမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာ ပြောရမယ်။ မြေယာကိစ္စဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာ ပြောရမယ်။ ပညာရေး ကိစ္စဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပါရမယ်။ မစားရ ဝခမန်းပြောနေရုံလောက်နဲ့တော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ ပြောနေတဲ့မူဝါဒတွေ ဘယ်လိုအကောင်အထည် ဖော်မလဲဆိုတဲ့ဟာက လုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အဲဒီတော့ အဲဒီလိုမျိုးကို လုပ်နိုင်တဲ့ ပါတီဆိုရင်၊ လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပါတီတွေကို မဲပေးကြပါ။ အဲဒီလိုမျိုး ဒီပါတီက အပြောအတိုင်း လုပ်သလား မလုပ်ဘူးလားဆိုတာကိုလည်း လူငယ်တွေက အွန်လိုင်းမှာလည်း သိပါတယ်။ စူးစမ်းလို့ရပါတယ်၊ လေ့လာလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဒီပါတီကိုတော့ဖြင့် ငါယုံကြည်ပါတယ်၊ ငါ မဲပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ဆောင်တာ။ အဲဒီတော့ အဓိကအားဖြင့် ခြုံပြီးပြောချင်တာကတော့ မူဝါဒအခြေစိုက်တဲ့ ပါတီတွေကို မဲပေးပါ။ အဲဒီလိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရော၊ ဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့် မေးမြန်းပေးသွားတဲ့ မောင်လေးတွေ ညီမလေးတွေကိုရော ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်။
တင်ဆက်- နေရီရီ- နွယ်နီတင်မောင်
Tags: Any Questions?First time votersရှမ်းပြည်နယ်၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ
Previous story Any Questions? ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် ( တတိယပိုင်း)
Next story မန္တလေးတိုင်းရှိ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများကို ထောက်ပံ့ကြေး ကျပ် ၁ သိန်းစီ ပေးမည်